Kheyre Oo Soo Xiray Shirka Agaasimeyaasha Guud Ee Wasaaradaha Dowladda & D/Gobaleedyada – Samawadenews
QORALKA Afka Somaliga & Dhaqanka
TAARIIKHDA SOOMAALIDA Xorriyadda ka Hor iyo Kadib
Taliyaha Ciidamada Asluubta G. Sool oo beeniyey in Maxaabiis lagala baxay xabsiga Laascaanood.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo gaadhay Dhuusamareeb.
Taliska Ciidanka Booliska oo booqday Degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.
Wafdi ka socda Ururka Suxufiyaasha Xuduuda aan lahayn ee RSF oo Muqdisho gaadhay.
Warar Dheeraad ah oo ka soo baxaya Qarax ka dhacay Degmada Kaxda ee G. Banaadir.
Hay’adda NISA oo ku Eedaysay qaar ka mid ah Laamaha Dowladda inay Gacan siiyaan Alshabaab.
C/raxmaan Cadami “Xukuumada waxan ku dhaliilaynaa inay ka hortegi wayday Go’aanka QM”
Sh. Cali Wajiis “Waa lagama maarmaan inaan la iibsan Alaabta uu soo saaro Faransiisku”
Xabad joojin cusub oo ay yeelanayaan Dalalka Armenia & Azerbajaan.
Maxkamada Luuq oo xukun Dil ah ku fulisay Nin Askari ku Dilay Luuq.
Ra’iisal Wasaaraha JFS oo kormeeray Wadooyin xidhnaa oo dib loo furay.
Ciidamada Booliska S.land oo qabtay lacag Faalsa ah
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka JFS oo maanta la dhaariyey.
Wasiir u Dowlaha Wasaarada Ganacsiga oo kulan la qaatay Wafdi ka socda Dowladda Sweden.
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Faransiiska oo hadalo kulul isdhaafsaday.
Jaamac Shabeel “Qabyaaladu yaanay ina Waalin”
Suldaan C/nuur Sh. Cabdillaahi oo lagu Caleemo saaray Jufo Galiilay ee G. Awdal.
Ex Wasiir Maxamed Xayir Maareeye oo eedaymo u jeediyey Xukuumada cusub ee JFS.
Ex Madaxweyne Barack Obama “Trump wax Qorshe ah uma hayo Covid”
Ciidamada Amaanka Puntland oo qabtay Doonyo sida Hub Sharci darro ah.
Xisbiga Waddani oo ka hadashay Imaanshaha Maxamed Cumar Carte.
Madaxweynaha Puntland oo furay Kalfadhigii 47aad ee Baarlamanka.
Madaxweyne Muuse Biixi oo Cafis u fidiyey Maxamed Cumar Carte.
Taliyaha Ciidanka Booliska JFS oo gaadhay magaalada Dhuusamareeb.
Adeega Gaadiidka Safar oo lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso.
Wariye Cagmadhige oo soo bandhigay Taariikhda Afgambigii Siyaad Barre 21kii Oktoobar.
Madaxweyne Farmaajo oo isbedel ku sameeyey Saraakiisha Ciidamada.
Xisbiyada Suudaan oo ka soo horjeestay Heshiiska Sudan & Israel.
Wasiirka Arrimaha Dibeda oo u mahadceliyey Baarlamanka Soomaaliya.
Golaha Wasiirada JFS ee cusub oo la Ansixiyey.
Ra’iisal Wasaaraha JFS oo Barnaamijka Xukuumadiisa u gudbiyey Baarlamanka.
Maraykanka oo Ansixiyey Dawo loo isticmaalayo Covid-19.
Dhagaysi Dadweyne: Sharciga Hanti Dhowrka Qaranka.
S.land oo musaafurisay Nin Diinta kirishtanka ku faafinayey oo Biyaha u shaqaynayay.
Qaramada Midoobay oo ka hadashay Doorashada Soomaaliya.
Guddoomiye Ciro oo laga helay xanuunka Covid-19.
Beel sheegtay inay Cadaalad daro kala kulmeen Maamulka Puntland.
Doodii ugu dambaysay ee Doorashada Maraykanka Trump & Biden.
Shirk Golaha Wasiirada Puntland oo looga hadlay Amniga iyo Covid-19.
Faahfaahin Dagaal dhexmaray Ciidamada Kenya & Soomaaliya
Suldaanka Guud ee Beelaha Daarood oo Madaxweynaha ku Eedeeyey Kali-talisnimo
Qorilugud: Banaanbax looga soo horjeedo xukun ay riday Maxkamada M-jeex.
Dowladda Jarmalka oo 7.2 Million Euro ugu deeqday Maamulka Puntland.
Wasiirka Maaliyadda JFS oo kormeer ku tegey Dekeda Muqdisho.
Xoghayaha Qorshaynta Waddani oo sheegay inay mucaaradadu ay wax toosinayso.
Jabuuti oo xidhay Xuduudaheeda muddo 15 casho ah oo loo sababaynayo fiditaanka Covid-19.
Saraakiil ka tirsan Xisbiga ONLF oo lagu xidhay magaalada Qabri Dahare.
War murtiyeed laga soo saaray xadhiga Taliyihii Ciidamada Danab ee JFS.
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo jinsiyadaha JFS oo Qarax ka badbaaday.
Mashruuca Horumarinta Biyaha oo laga hirgalinayo Dalka.
Kheyre Oo Soo Xiray Shirka Agaasimeyaasha Guud Ee Wasaaradaha Dowladda & D/Gobaleedyada
Muqdisho, Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta soo xiray shirka agaasimayaasha guud ee wasaarahada heer federaalka iyo heer dowlad gobaleed oo Muqdisho ka socday intii u dhexeysay Aktoobar 22-26, 2019.
Shirka oo ahaa kii ugu horreeyay ee agaasimayaasha guud isugu yimaadaan ayaa dib loogu eegay guulihii ay gaareen dowladda federaalka iyo dowlad gobaleedyada xubnaha ka ah iyo caqabadihii lala kulmay intii lagu guda jiray dhaqan gelinta ajandayaasha iyo qorshe howleedka dowladda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku bogaadiyay agaasimayaasha guud shaqada ballaaran ee ay qabteen maalmihii ay u fadhiyeen shirka ay dib ugu eegayeen wixii qabsoomay, ugana tashanayeen qorshayaasha wasaaraha ee hor-tebinta leh, waxa uuna ku dhiirri geliyay in ay laba jibbaaraan dadaalkooda horumarinta qaranka.
Shirka ay yeesheen agaasimayaasha guud ayaa gogol xaar u noqonaya sare u qaadidda wadashaqeynta dhaw ee ka dhexeysa agaasimayaasha guud ee heer federaal iyo heer dowlad gobaleed oo qayb weyn ka qaadaneysa horumarinta adeegyada dowladdu u qabato shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya Oo Dhaqaalihii Ugu Horeeyay Ka Heshay Shidaal 1.7 Milyan.
“Nin Walba Oo Qaranka Wax Usoo Qabtay Mid Yaroo Uu Adeer U Yahay Ayaa Buug Ka Qoraya,”Madaxweyne Biixi .
Baarlamanka SL oo ansixiyey sharciga wax ka bedelka xeerka Degmooyinka iyo gobolada iyo Xuduudahooda, Maroodi- jeex, Burco, Sanaag, Awdal, Sool, Saaxil. Daawo
Sheekh Maxamed Kenyawi oo Raali gelin ka bixiyey, hadal uu hore u yidhi oo sida loo qaatay gaf ku ahaa Dumarka. Daawo
Somaliland: Xildhibaan hadlay; “Xisbiyada Qaran kadeed bay ku yihiin Dalka, waa xisbiyo Boorso gaar ah lagu sito, si gaar ahna loo leeyahay, anna waxaan samaynayaa Xisbi Harti ah” DAAWO
Asr 2:10 PM
Magrib 4:39 PM
[Al-Fatir (the Originator): 17]